नजिक न्युज | सङ्ख्यासँगै दायरा बढाउँदै दोस्रो लहरको कोरोना
काठमाडौँ, वैशाख २० गते । वैशाखको पहिलो साता बागलुङको बलेवास्थित नारायणस्थानको एक विद्यालयमा ठूलो सङ्ख्याका विद्यार्थी र शिक्षकमा एक्कासी कोभिड–१९ देखिएको खबर आयो ।
सङ्क्रमणको जालो च्यात्न तत्कालै त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले स्कुल र स्कुलसँग जोडिएको परिवार बसोबास गर्ने क्षेत्र तोकेर वैशाख ७ गते निषेधाज्ञा नै जारी गर्यो । बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्की उक्त घटना स्मरण गर्दै भन्नुहुन्छ, “हामीले ‘चेन ब्रेक’ गर्न तत्कालै उक्त निर्णय गरेका थियौँ, त्यो सफल भएको अनूभूति पनि छ ।” उहाँका अनुसार अहिले जिल्लामा सक्रिय सङ्क्रमित १०९ जना छन् । ती विद्यार्थीमध्ये धेरै निको भएर घर गएसकेका छन् ।
त्यसबेलासम्म मुलुकका अन्य केही जिल्लामा सङ्क्रमितहरु बढ्दै थिए । भारतमा भयावह स्थिति आइसकेकाले त्यहाँबाट फर्किएका मानिस विना परीक्षण गाउँगाउँ पुगिरहेका थिए । विडम्बना के छ भने उनीहरुबाटै नेपालमा यो भाइरस फैलिन पुगेको जनस्वास्थ्यविद् बताउँछन् ।
त्यसको दुई हप्ता पुग्दै आजसम्म ४१ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ । यो क्रम दैनिक बढिरहेको छ । आदेश जारी भएका जिल्लामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा र गतिविधि गर्न पाइँदैन । यसो गर्दा सङ्क्रमण फैलिनबाट रोकिएर ‘चेन ब्रेक’ हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
स्वास्थ्य विज्ञले छिटो गतिमा सङ्ख्या र क्षेत्र विस्तार भइरहेको बताएका छन् । शुरुवाती चरणमा शहरबजारमा बढी सङ्क्रमित देखिएकामा अहिले भित्र बजार तथा गाउँगाउँमा समेत देखिन थालेकाले जोखिम बढ्दै गएको छ । जसका कारण अहिले अस्पतालमा आइसियु, भेन्टिलेटर र अक्सिजन पाउन समस्या भइरहेको छ । वर्तमान विषम परिस्थितिमा बढ्दो जोखिमको आँकलन गरेर उपयुक्त आदेश जारी गर्दै नियन्त्रणमा खटिन ७७ वटै जिल्लालाई निर्देशन दिइसकिएको गृह मन्त्रालयलका प्रवक्ता जनकराज दाहाल बताउनुहुन्छ ।
नेपालमा विसं २०७७ फागुनपछि विस्तारै दोस्रो लहरको सङ्क्रमणले गति लिएको थियो । चैतको अन्तिमसम्म केही सय सङ्क्रमित देखिएकोमा वैशाखको पहिलो साताबाट एक्कासि बढ्न थालेको हो ।
“सङ्क्रमित सबै जिल्लामा देखिएका छन् तर एक्कासी सङ्क्रमित बढ्ने क्षेत्र पनि विस्तार भइरहेको छ”, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भन्नुभयो, “विस्तारै गाउँगाउँ र भित्री शहरमा बढ्दो छ ।” उहाँले सङ्ख्यासँगै त्यसको दायरा पनि बढ्दै गएकोे बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको शनिबारसम्मको अभिलेख अनुसार प्रदेश १ को मोरङ, प्रदेश २ को पर्सा, वागमती प्रदेशको काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र चितवन, गण्डकी प्रदेशको कास्की, लुम्बिनी प्रदेशको दाङ, बाँके र रुपन्देही, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा ५०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित छन् ।
यस्तै २०० भन्दा माथि सक्रिय सङ्क्रमित रहेका जिल्लामा प्रदेश १ को सुनसरी र झापा, प्रदेश २ को बारा, धनुषा र रौतहट, वागमती प्रदेशको मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक र नुवाकोट, गण्डकी प्रदेशको गोरखा, नवलपरासी पूर्व र बाग्लुङ, लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा, बर्दिया, कपिलवस्तु र नवलपरासी पश्चिम तथा सुदुरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर छन् । यी दुई सय सक्रिय सङ्क्रमित रहेका जिल्लामा क्रमश ५०० माथि पुग्ने क्रम जारी छ भने २०० भन्दा कम सक्रिय सङ्क्रमित रहेका जिल्लामा पनि क्रमशः वृद्धि भइरहेको छ ।
सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अर्चना श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो तथ्याङ्कले नेपालमा २२८ प्रतिशतले सङ्क्रमण वृद्धि भइरहेको देखाएको छ । यो गति विश्वका अन्य मुलुकको भन्दा उच्च हो र भारतको भन्दा बढी हो, भन्नुहुन्छ श्रेष्ठ । विज्ञहरु नागरिक आफैँ सचेत नहुने हो भने स्थिति थेग्न गाह्रो हुने आँकलन गर्न थालिसकेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेर अस्पतालले थेग्न नसक्ने अवस्था आउन लागिसकेको भन्दै चेतावनी दिइसकेको छ ।
मुलुकमा शनिबारसम्म तीन लाख २८ हजार ८९३ जना सङ्क्रमित भएकामा दुई लाख ८२ हजार निको भएर घर फर्किएका छन् । निको हुने दर झण्डै ८६ प्रतिशत छ । यो प्रतिशत पछिल्लो समयमा घट्दो क्रममा छ । हालसम्म झण्डै तीन हजार ३०० को मृत्यु भइसकेको छ ।
विश्वमा भने १५ करोड २० लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित भएकामा झण्डै ३२ लाखको मृत्यु भइरहेको छ । हाल झण्डै दुई करोड सक्रिय सङ्क्रमित छन् ।
चीनको वुहान नै कोभिड १९ सङ्क्रमणको मुहान मानिन्छ । त्यहाँबाट आएका एक नेपालीमा विसं २०७६ माघ ९ मा कोभिड– १९ पुष्टि भएको थियो । चीनबाट आएपछि उनी पुस १६ मा चिकित्सकको सम्पर्कमा गएकामा पुस २८ गते भर्ना भएका थिए । माघ ९ गते उक्त भाइरस रहेको पुष्टि गरिएको थियो । पुष्टि गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको हङ्कङस्थित प्रयोगशालामा परीक्षण गराउनुपरेको थियो ।
त्यसपछि फ्रान्सबाट कतारको दोह हुँदै नेपाल आएकी युवतीमा चैत १० मा दोस्रो कोभिड–१९ पुष्टि भएको थियो । उहाँ चैत ४ गते नेपाल आउनुभएको थियो । चैत १२ गते तेस्रो व्यक्तिमा देखिएको थियो ।
सन् २००२ मा चीनमा सार्स कोरोना देखिएको थियो । त्यसको पुष्टि २००३ मा डब्लुएचओले ग¥यो । त्यहाँ आठ हजार जनामा सङ्क्रमण भएकामा ७७४ को मृत्यु भएको थियो । सन् २०१२ मा साउदी अरबमा मर्स कोरोनाको सङ्क्रमण हुँदा मृत्युदर ३५ प्रतिशत थियो । सार्सको मृत्युदर १० प्रतिशत थियो । सन् २०१५ मा दक्षिण कोरियामा पनि देखिएको थियो । अहिलेको मृत्युदर भने तीन प्रतिशत रहेको यसअघि नै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सार्वजनिक गरेको थियो ।
कोरोना भाइरसले रुघाखोकीदेखि गम्भीर प्रकारको स्वासप्रश्वासको समस्या निम्त्याउन सक्छ । नयाँ भाइरस भएकाले खास उपचार विधि पत्ता लागिसकेको छैन । शुरुवाती चरणको भन्दा अहिलेको सङ्क्रमण कडा खालको र बढी फैलिने रहेको चिकित्सकले बताएका छन् ।
यसको निदानका लागि अहिले पनि विश्वका वैज्ञानिक औषधिको खोजीमा लागिरहेका छन् । कतिपय खोप प्रयोगमा समेत आइसकेको छ । शुरुमा जनावरबाट मान्छेमा आएको यो भाइरस पछिल्लो समयमा मान्छेबाट मान्छेमा सरेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले पुष्टि गरिसकेको छ ।
सोमबार २०, बैशाख २०७८ ०७:३९ मा प्रकाशित